अन्ततः गर्ल्याम्मै ढल्याे माधव नेपालकाे गुट, नेताहरुको जम्बो टोली फर्कियो ओली क्याम्पमै ! को-को ? - News 88 Post
अन्ततः गर्ल्याम्मै ढल्याे माधव नेपालकाे गुट, नेताहरुको जम्बो टोली फर्कियो ओली क्याम्पमै ! को-को ?
June 3, 2021 N88LeaveaComment on अन्ततः गर्ल्याम्मै ढल्याे माधव नेपालकाे गुट, नेताहरुको जम्बो टोली फर्कियो ओली क्याम्पमै ! को-को ?
एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग संघर्ष गरिरहेको वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल समूहभित्र तीव्र विवाद देखिएको छ। एमालेमै रहेर ओलीसँग संघर्ष गर्ने वा नयाँ पार्टी निर्माण गरेर अघि बढ्ने भन्ने विषयमा माधव समूहमा मतभेद देखापरेको हो।
माधव समूहले ओलीसँग सर्वोच्च अदालतको फागुन २३ को फैसलाअनुसार पार्टी नवौं महाधिवेशनको पार्टीको सांगठनिक संरचनाका आधारमा अघि बढ्नुपर्ने माग राख्दै आएको छ।
नेताहरू घनश्याम भुसाल, सुरेन्द्र पाण्डे, गोकर्ण विष्ट, योगेश भट्टराईलगायत एमालेभित्रै अन्तरसंर्घष गर्ने निर्णयसहित समाहित हुने प्रयासमा छन्। तर नेता नेपाल भने यसमा सहमत छैनन्।
यस क्रममा भुसाल, पाण्डे, विष्ट, भट्टराईसहितले संस्थापन पक्षसँग छलफल गरिरहेका छन्। उनीहरुले सोमबार नेताहरु सुवास नेम्वाङ, विष्णु पौडेल, प्रदीप ज्ञवाली र शंकर पोखरेलसँग छलफल गरेका थिए। सो क्रममा ओली पक्षले सर्तसहित २०७५ जेठ २ मा फर्किन प्रस्ताव गरेको थियो।
नेपाल निकट केन्द्रीय सदस्य जीवनराम श्रेष्ठ सर्तसहित कुनै पनि हालतमा एकता अघि नबढ्ने बताउँछन्। ‘सर्तसहित फर्किने कुरा कुनै पनि हालतमा हुँदैन। त्यो अनावश्यक कुरो हो,’ उनले भने, ‘अदालतको फैसलाअनुसार अघि बढे मात्रै एकता जोगिन्छ।’
नेपाल पक्षले देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन गरेको हस्ताक्षरबाट बाहिरिएर सहमतिमा आउनुपर्ने सर्त ओली पक्षको हो। तर, त्यो सर्त मान्न नेपाल सहमत छैनन्।
दोस्रो तहका नेताहरु एमालेभित्रै अन्तरसंर्घष गर्ने निर्णयसहित समाहित हुने प्रयासमा रहेका बेला नेता नेपालको विमति राखेका हुन्। यद्यपि उनीहरुले अनौपचारिक रुपमा भइरहेको छलफलबारे आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरेका छैनन्।
नेपाल निकट केन्द्रीय सदस्य जीवनराम श्रेष्ठ सर्तसहित कुनै पनि हालतमा एकता अघि नबढ्ने बताउँछन्। ‘सर्तसहित फर्किने कुरा कुनै पनि हालतमा हुँदैन। त्यो अनावश्यक कुरो हो,’ उनले भने, ‘अदालतको फैसलाअनुसार अघि बढे मात्रै एकता जोगिन्छ।’ उनले यस बीचमा गरिएका निर्णय खारेज गरेर अघि बढ्नुपर्ने बताए। ‘सर्त राख्नुपर्ने कारण छैन। त्यो भनेको एकता नचाहनु हो,’ उनले भने।
उनले वार्ताको वातावरण बनाउने हो भने नेताहरुमाथि गरिएको कारबाही फुकुवा हुनुपर्ने बताए। दोस्रो पुस्ताका केही नेताहरुले गरिरहेको छलफल आधिकारिक नभएको भन्दै उनले त्यसलाई स्वाभाविक लिनुपर्ने बताए।
नेता नेपालले बुधबार जनवर्गीय संगठनका नेताहरुसँग छलफलमा पनि ओलीले नेताहरुलाई निष्कासन गरेको अवस्थामा केही नेताहरुले गर्ने वार्ताको कुनै औचित्य नहुने बताएका थिए।
उनले ओली सच्चिन तयार नदेखिएको भन्दै अब नयाँ पार्टी निर्माण गरेर अगाडि बढ्ने बताएका छन्। उनले बैठकमा आउने आउँछन् नआउने छुट्छन् भन्ने धारणा राखेकै कारण पनि यो कुरा प्रस्ट हुन्छ।
प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका अध्यक्ष ओलीले नेपाललगायतका केही नेताहरुबाहेकको एमाले बनाउन खोजेको नेपाल पक्षको बुझाइ छ। त्यसै कारण केही नेताहरुले आन्तरिक रुपमा गरेको छलफललाई आधिकारिक वार्ताको रुप दिन नसकिने नेपाल पक्षको निचोड छ। ‘उहाँहरु कफी–चिया खाएर केही छलफल गर्नुभएको होला। त्यसलाई आधिकारिक भन्न मिल्दैन,’ नेता श्रेष्ठले भने।
बेलायतको चर्चित पत्रिकामा नेपालको बदनाम गराउने समाचार
काेराेनासँगै नेपालमा अर्काे राेगकाे प्रकाेप बढ्ने खतरा, कैलालीमा एककाे मृत्यु
November 11, 2021 November 11, 2021 N88
अमेरिकाबाट कोरोनाविरुद्धको १५ लाख डोज खोप नेपाल आइपुग्यो, एक मात्रा लगाए पुग्ने
अफिलिएट मार्केटिङः अनलाइनबाटै पैसा कमाउने तरिका [सम्पूर्ण जानकारी]